Wali meydad hor leh ayaa laga soo saarayaa dhismiyaashii ku dumay Qaraxii Zoobe. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wali meydad hor leh ayaa laga soo saarayaa dhismiyaashii ku dumay Qaraxii...
Wali meydad hor leh ayaa laga soo saarayaa dhismiyaashii ku dumay Qaraxii Zoobe.
Wali waxaa la soo saarayaa meydad hor leh oo ku jira Dhismiyaashii ku dumay Qaraxii Shalay ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, sidoo kale dhaawacyo hor leh ayaa laga helay bur burka Dhismiyaasha.
Wariyaasha ku sugan Isbitaalada iyo halka uu qaraxa ka dhacay ayaa soo sheegaya warar Naxdin oo wali ka taagan Zoobe ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan maqlayaa Qeylida dad nool oo ku jira dhismiyaashii bur buray oo dalbanaya Caawimaad deg deg waxaana ku howlan badbaadinta dadkaasi shacab badan oo is xil qaamay gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa xalay ilaa hadda ku howlan Howlaha gurmadka ” sidaasi waxaa soo sheegaya Wariye ka tirsan Warbaahinta.
Isbitaal madiina ayaa sidoo kale buux dhaafiyay dhaawacyada iyo dhimashada waxaana geedaha Hoostooda la dhigay Dhaawacyo ay ka buuxsantay, sidoo kale meydad badan oo qaarkood Gubtay ayaa la dhigay Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.